Mosaic Portrait Bhaisikopo Remafirimu - Dhizaini magazini
Bhaisikopo Remafirimu Iyo yeArm film "Mharidzo yaMosesi" yakaburitswa seyakagadzirirwa pfungwa. Inonyanya kutaura nyaya yemusikana akabatwa chibharo. Ichena kazhinji ine tsanangudzo yerufu uye chiratidzo chekuchena. Iyi poster inosarudza kuvanza meseji ye "kufa" kumashure kwemusikana akanyarara uye akapfava, kuitira kuti aratidze manzwiro akasimba kumashure kwekunyarara. Panguva imwecheteyo, mugadziri akabatanidza zvinhu zveumhizha uye zviratidzo zvinopesvedzera mumufananidzo, zvichikonzera kufunga kwakanyanya uye kuongorora kweanoshanda emafirimu.
Zita rechirongwa : Mosaic Portrait, Vagadziri zita : Cinch Culture Media, Izita remutengi : CINCH 浅葱.
Bhaisikopo Remafirimu Cinch Culture Media Mosaic Portrait